Tag: apple | Martech Zone
China, Kurume 4, 2021 China, Kurume 4, 2021 Douglas Karr
Ichi ndicho chimwe chezvinyorwa zvinozivikanwa pa Martech Zone sezvo mabhizimusi uye vanhu vari kuendesa mavhidhiyo zvemukati marongero ekuvaka masimba online uye kutyaira kunotungamira kune ravo bhizinesi Ipo iMovie inogona kunge iri imwe yemapuratifomu anozivikanwa ekugadzirisa mavhidhiyo nekuda kwekushandisa kwayo, haisi imwe yemapuratifomu akasimba ekugadzirisa mavhidhiyo. Uye, isu tese tinoziva kuti kurekodha odhiyo kubva palaptop kamera kana webcam kamera zvinotyisa
Kana iwe wakadzika nemugwagwa wekunyora uye kutsikisa ebook, iwe unoziva kukanganisa neEPUB faira mhando, shanduko, dhizaini uye kugovera hazvisi zvekushaya moyo. Kune akatiwandei ebook mhinduro kunze uko ayo achakubatsira iwe kuburikidza neichi chiitiko uye tora yako ebook kuGoogle Play Mabhuku, iwo Mhando uye mamwe madhijidhi. Ebook inzira inonakidza yemakambani kumisikidza masimba avo munzvimbo yavo uye a
Nhau dzeApple kukwirisa kwayedza injini dzekutsvaga inhau dzinonakidza mumaonero angu. Ini ndaigara ndichivimba kuti Microsoft inogona kukwikwidza neGoogle… uye ndainetseka kuti Bing haina kuzombowana mukana wakakwikwidza. Neye yavo Hardware uye yakadzamidzirwa browser, iwe ungafunga kuti vanogona kutora yakawanda musika mugove. Handina chokwadi chekuti sei vasina asi Google yakanyanyisa kutonga pamusika ne 92.27% share yemusika… uye Bing ine 2.83% chete.
SkAdNetwork? Kuvanzika kweSandbox? Ndakamira neMDC5
Muvhuro, September 28, 2020 Chipiri, Gunyana 29, 2020 David Finkelstein
Apple's June 2020 chiziviso chekuti IDFA ichave chinhu chekupinda-mukati chevatengi neSeptember iOS 14 kuburitswa kwakanzwa kunge rugi rakaburitswa kubva pasi peye 80 bhiriyoni indasitiri yekushambadzira, ichitumira vashambadziri mukutambudzika kuti vawane chinotevera chakanakisa chinhu. Izvozvi zvave pamusoro pemwedzi miviri, uye isu tichiri kukwenya misoro yedu. Nechangobva kudikanwa kudzoreredzwa kusvika muna 2021, isu seindasitiri tinoda kushandisa nguva ino zvinobudirira kuti tiwane mwero wegoridhe mutsva